आज प्रधानन्यायाधीशका विषयमा कस्तो निर्णय आउला ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
आज प्रधानन्यायाधीशका विषयमा कस्तो निर्णय आउला ?
काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्याधीश दीपकराज जोशीको नियुक्तिका बारेमा अन्तिम निर्णय आज हुने भएको छ । अधिकार भएको संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिको आज सोमवार बस्ने बैठकले उनको नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा निर्णय लिनेछ ।
नाम अनुमोदन हुने सम्भावना धेरै छ तर छानविन गहिरो गरि भइरहेको छ। परेका उजुरीका बारेमा बिहीवार जोशीलाई बोलाएर छलफल गरे पनि निर्णयका लागि आईतवार राखिएको बैठक दोस्रो पटक सारिएको हो।
जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र उनले विगतमा गरेका केही फैसलाका बारेमा समितिमा उजुरीहरु परेका थिए। कायममुकायम प्रधानन्याधीशका रुपमा काम गरिरहेका र संवैधानिक परिषदले प्रधानन्याधीशमा सिफारिस गरेका दिपकराज जोशीले संसदीय समिति गठन प्रकृयामा भएको ढिलाइका कारण सुनुवाइका लागि लामै समय भएको छ ।
गत बिहीवार सुनवाइ सकिए पछि पनि अन्तिम निर्णयका लागी पनि उनले कुर्नु परिरहेको छ। केही सदस्यको केही फरक दृष्टिकोण भएपनि सहमतिका निर्णय हुने समितिका सदस्इ योगेश भट्टराईले जानकारी दिए । संसदको बैठक र केही सदस्य बाहिर रहेका कारण भन्दै सारिएको बैठक फेरि सोमवार २ बजेका लागी बोलाइएको छ।
सुनुवाइ सकिए पनि सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित प्रधानन्याधीश जोशीले दिएका जवाफहरुबाट समितिका सदस्यहरु सन्तुष्ट नभएकाले बैठक पर सर्दै गएको बताउने गरिएको छ। जोशीविरुद्ध सार्वजनिक जग्गा, क्यासिनो र एनसेलको कर छुट लगायतका विषयमा गरिएका विगतका फैसला र दुईवटा विद्यालयबाट एसएलसी दिए पनि सिम्बोल नम्बर एउटै भएको जस्ता विषयमा उजुरीहरु परेका थिए।